Ibhodlela leManzi Eliyingcosana Elithengisa Umsila China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Amabhodlela Amanzi weSilicone > Amapulazi Emanzi Amanzi Ayingenakutholakala Ngaphandle > Ibhodlela leManzi Eliyingcosana Elithengisa Umsila
Isitolo sethu samanzi esithengisa kakhulu se-Silicon Sokuphuza Amanzi ashisa kakhulu emakethe, ngezansi yizingxenye zezinzuzo zethu.
I-Grade Grade Silicone (i-Stain, i-Oder, ne-Taste Resistant)
I-Rollable futhi ifakwe nge-carabiner yensimbi kanye ne-retainer band for clip-on and storage
Ikhululekile - igcina isiphuzo kubanda amahora
I-Bottle ngayinye ihlelwe ngokugcwele esikhwameni se-poly ecacile, ithunyelwa ngeqoqo lezimabhodlela ezimbili
Ingxenye yazo zonke izinzuzo ezinikelwe ezikhungweni zokuhlengwa nezinhlangano zokuvikela (eziqinisekisiwe).
Amabhodlela wamanzi angaphandle aphephile angaphandle kwezemidlalo yiyona imikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. Amabhodlela ethu amanzi angaphandle aphethwe yi- Outdoor ngokuyinhloko ikakhulukazi ekusebenzeni kwethu kwendawo. Okubalulekile kwamabhodlela ethu amanzi angaphandle aphethwe yi- Outdoor yi-100% ye-BPA ebangeni lobuchwepheshe bebanga lobuchwepheshe kanye ne-PP. Amanzi egoqekayo zemidlalo ze-Outdoor amabhodlela yethu ngokuphelele non-enobuthi, futhi ovunyelwe iSigungu FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyifektri, ngakho-ke singakunika izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
ree Bottle Water